थपिएको मूल्य | अर्थतन्त्र वित्त
एनकर्नी आर्कोया | 13/10/2021 21:01 | अद्यावधिक गरियो 13/10/2021 21:13 | सामान्य अर्थव्यवस्था
के तपाइँ कहिल्यै सुन्नुभएको छ थप मूल्य एक राम्रो, एक उत्पादन को, एक कम्पनी को, एक सेवा को? के तपाइँ यो शब्द समेटेको थाहा छ? विश्वास गर्नुहोस् वा नगर्नुहोस्, यो केहि चीज हो जुन महत्त्वपूर्ण छ। र धेरै।
यदि तपाइँ यो शब्द को विशिष्ट अवधारणा जान्न चाहानुहुन्छ, यदि तपाइँ जान्न चाहानुहुन्छ कि यो कसरी कम्पनीहरु, उत्पादनहरु, सेवाहरु मा पाउन को लागी ... र कसरी यसलाई सुधार गर्न को लागी, तब तपाइँ सबै कुञ्जीहरु तपाइँ जान्न आवश्यक छ।
1 थपिएको मूल्य के हो
1.1 एक कम्पनी को मूल्य थपियो
1.2 एक व्यक्तिको मूल्य थपियो
2 यो कसरी कम्पनीहरु मा खोज्न को लागी
3 यसलाई कसरी सुधार गर्ने
4 मूल्य तत्वहरु
थपिएको मूल्य के हो
हामी "अतिरिक्त आर्थिक मूल्य" को रूप मा थपिएको मूल्य परिभाषित गर्न सक्छौं। र यो हो कि यो मानिन्छ एक राम्रो वा सेवा को लागी भुक्तान गरिएको मूल्य मा वृद्धि किनकि यो रूपान्तरण हुँदैछ।
उदाहरण को लागी, कल्पना गर्नुहोस् कि तपाइँ एक पुतली किन्नुहुन्छ। यो एक तपाइँ १० यूरो को लागत। जे होस्, तपाइँ 10 यूरो लगानी गर्न को लागी एक लक्जरी काम, rhinestones, गहना संग राख्न को लागी निर्णय गर्नुहुन्छ ... त्यो हो, यदि तपाइँ यसलाई तपाइँको लगानी र पुतली को खर्च पुन: प्राप्ति गर्न चाहानुहुन्छ गुडिया १५ यूरो खर्च हुनेछ। तर यो बाहिर जान्छ कि तपाइँ यसलाई5यूरो को लागी बेच्नुहुन्छ। यदि हामी खर्च घटाउँछौं, ५५-१५ यूरो हामी ४० यूरो हुनेछौं। त्यो थपिएको मान हुनेछ, के एक पल्ट प्राप्त हुन्छ एकपटक खर्च हामी यसलाई रूपान्तरण गर्न को लागी घटाईएको छ।
अन्य शब्दहरुमा, यो केहि 'अतिरिक्त' हो कि त्यो राम्रो वा सेवा को मूल्य बढाउन को लागी अनुमति दिन्छ किनकि यो एक परिवर्तन गरीएको छ र यो अधिक मूल्य दिईएको छ।
यस अर्थमा, प्रत्येक राम्रो वा सेवा एक कम, मध्यम वा उच्च थपिएको मूल्य हुन सक्छ। उदाहरण को लागी:
कम जोडिएको मूल्य: ती सामान र / वा सेवाहरु हुनेछ जहाँ परिवर्तन हुन्छ कि न्यूनतम हुन्छ र त्यहाँ धेरै संग व्यवहार गर्न को लागी छैन। केहि नगण्य हुनाले, यो प्राप्त मूल्य थप कम छ। तपाइँ थोरै नाफा कमाउन जाँदै हुनुहुन्छ।
मध्यम: ती ती उत्पादनहरु हुन् जसमा एक अधिक विस्तृत प्रक्रिया उनीहरुलाई रूपान्तरण गर्न को लागी लिईन्छ, तर त्यो एक ठूलो लगानी को आवश्यकता छैन।
उच्च थपिएको मूल्य: यो तब हुन्छ जब यी सामानहरु वा सेवाहरु एक लगभग पूर्ण रूपान्तरण बाट गुज्रन्छ, उन्नत ज्ञान र प्रविधिहरु को उपयोग गरीन्छ कि उनीहरुलाई अधिक मूल्य दिन्छ।
वास्तव मा कुनै पनि उत्पादन वर्गीकरण को कुनै मा फिट हुन सक्छ। उदाहरण को लागी, एक टी शर्ट।
यो कम जोडिएको मूल्य को हुनेछ यदि तपाइँ मात्र एक कढाई सन्देश राख्नुहुन्छ। मध्यम मूल्य को यदि, उदाहरण को लागी, तपाइँ यसलाई एक टाई डाई संग एक मूल र जिज्ञासु आकार संग टाई। र यो उच्च मूल्य को हुनेछ यदि तपाइँ पनि rhinestones र एक प्राविधिक प्रणाली जो शर्ट को रंगहरु लाई संगीत को ताल मा सार्नुहोस्।
यसको अतिरिक्त, तपाइँ जान्नु पर्छ कि यो केवल सामान र सेवाहरु को एक मामला हैन। तपाइँ पनी मानिसहरु, कम्पनीहरु को हिस्सा हुन सक्नुहुन्छ ... चलो यसलाई अर्को हेर्नुहोस्।
एक कम्पनी को मूल्य थपियो
एक कम्पनी को मामला मा, थपिएको मूल्य राम्रो संग तपाइँ पाउनु हुने फाइदाहरु संग मेल खान्छ। त्यो हो, आम्दानी र खर्च को बिचको भिन्नता, यो राम्रो काम को कारणले गर्दा भएको हो।
निस्सन्देह, थपिएको मूल्य पनि काम मा एक सुधार को माध्यम बाट पेशकश गर्न सकिन्छ, श्रमिकहरु र नियोक्ताहरु को बीच सम्बन्ध मा ...
एक व्यक्तिको मूल्य थपियो
एक व्यक्ति कल्पना गर्नुहोस्। यो एक कुनै पढाई छ र उनीहरुलाई पढाईएको छ मा काम गर्दछ, तर अधिक बिना। अब, अध्ययन बिना त्यो व्यक्ति कल्पना गर्नुहोस्। उहाँ जसरी पनी सिकाउनुभएको छ काम गर्दछ, तर जोश को लागी आवेदन र परिणाम प्राप्त गर्न को लागी कि अरु सक्षम छैनन्। के दुबै मूल्य वा केवल दोस्रो जोडिएको छ?
वास्तव मा, दुबै मूल्य थपिएको छ, तर दोस्रो पहिलो भन्दा धेरै छ।
सामान्य मा, मानिसहरु को थपिएको मूल्य यी अध्ययनहरु, ज्ञान, प्रशिक्षण लाई जनाउँछ ... साथै अनुभव को रूप मा, जान्नुहोस्, कसरी कौशल, क्षमताहरु ...
यो कसरी कम्पनीहरु मा खोज्न को लागी
कम्पनीहरु मा थपिएको मूल्य खोज्न केहि छैन कि प्राय नग्न आँखा संग देख्न सकिन्छ। जे होस्, यो प्राप्त गर्न योग्य छ। यसको लागी, यो आवश्यक छ एक ग्राहक प्रोफाइल स्थापित गर्न को लागी उनीहरु के मन पराउँछन्, उनीहरुको आवश्यकता के हो, उनीहरु के खोज्दैछन् ...
एक पटक बिक्री हुन्छ, सन्तुष्टि को डिग्री पनि समीक्षा गरिनु पर्छ; त्यो हो, यदि उनी खुसी छन्, यदि तपाइँ केहि सुधार गर्न सक्नुहुन्छ, आदि।
निस्सन्देह, कम्पनीहरु मात्र उत्पादनहरु र / वा सेवाहरु मा थपिएको मूल्य पाउन सक्दैनन्, तर यो पनी त्यहाँ काम गर्ने मानिसहरु मा पाउन सकिन्छ, जो व्यापार मा केहि बढी योगदान गर्न सक्छन् र यो पनि सुधार गर्न सक्छन्।
यसलाई कसरी सुधार गर्ने
यद्यपि यो सधैं भनिएको छ कि सबै कुरा पहिले नै आविष्कार गरीएको छ र यो धेरै कठिन छ कि प्रयोगकर्ताहरुलाई केहि राम्रो वा केहि बिल्कुल अद्वितीय छ कि प्रस्ताव गर्न को लागी, यो अझै पनी हासिल गर्न सकिन्छ।
को मामला मा थपिएको मान मा सुधार हामी तपाइँलाई बताउन जाँदैछौं कि यो सजिलो हुनेछ, यो बाट टाढा। तर तपाइँसँग धेरै तरिकाहरु छन्:
केहि प्रदान गरीरहेछ जो अरु कोहि प्रदान गर्दैन। यो केहि सामग्री, केहि अमूर्त, एक विशेष छुट, एक उत्पादन वा सेवा हो कि अरु के प्रस्ताव को कर्ल कर्ल हुन सक्छ ...
एक अतिरिक्त जोड्नुहोस्। त्यो हो, यसमा केहि अरु राख कि यसको गुणस्तर मा सुधार। यो पनि छिटो हुन सक्छ ...
ग्राहकहरु को अपेक्षाहरु लाई पार गर्नुहोस्। यो सायद सबैभन्दा सरल छ। कल्पना गर्नुहोस् कि उनीहरु तपाइँलाई एक उत्पादन को लागी सोध्छन्। र तपाइँ एक धन्यवाद सन्देश पठाउनुहुन्छ, खरीद पुष्टिकरण, इनभ्वाइस र अन्य संग ठेठ एक को अतिरिक्त। त्यसोभए, तपाइँ ढुवानी तयार पार्नुहोस् र यसलाई निजीकृत गर्नुहोस्। जब तपाइँ यसलाई प्राप्त गर्नुहुन्छ, तपाइँको अपेक्षाहरु, तपाइँ अनलाइन बनाउनुहुन्छ कि बाकी को तुलनामा, पार हुनेछ, र त्यो तपाइँको लागी महत्वपूर्ण महसुस गराउनेछ। र फेरी किन्न को लागी यदि अवसर आउँछ।
यस अवस्थामा, टेक्नोलोजी र विवरण सुधार गर्न र अधिक जोडिएको मूल्य दिन को लागी महत्वपूर्ण हुन सक्छ। तपाइँको ग्राहक संग अधिक सम्बन्धित, उनीहरु को लागी तपाइँ बाट किन्न को लागी सहजता, immediacy वा निजीकरण बिभिन्न बिन्दुहरु जसमा कि मूल्य बढाउने लक्ष्य छ।
एक उत्पादन वा सेवा महत्त्वपूर्ण छ जब यो एक ग्राहक को इच्छा वा आवश्यकता को पूरा गर्न को लागी कार्य गर्दछ। त्यो भन्नु पर्ने हो, यदि यसको माग छ भने यसको मूल्य छ। तेसैले, तत्वहरु जसमा यो मान स्थापित छ:
त्यो इच्छा वा माग पूरा गर्ने शक्ति।
यो के ल्याउँछ।
यो सबै एक सेट हो कि त्यो राम्रो वा सेवा को हिस्सा हो र त्यो ठूलो वा कम जोडिएको मूल्य संग endows।
लेखको पूर्ण मार्ग: अर्थव्यवस्था वित्त » सामान्य अर्थव्यवस्था » मूल्य थपियो